An-tsambo rehetra! Niroso tamin'ny fampiroboroboana ny fizahantany amin'ny haino aman-jery sosialy i India
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » An-tsambo rehetra! Niroso tamin'ny fampiroboroboana ny fizahantany amin'ny haino aman-jery sosialy i India
Febroary 9, 2018
Nanomboka nampiasa media sosialy i India ho fampiroboroboana ny fizahantany. Ao anatin'izany, bilaogera 60 avy amin'ny firenena 23 no mandeha amina lamasinina lafo vidy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena.
Bilaogera 15 andiany voalohany no niditra tao amin'ny Palace on Wheels tamin'ny 7 febroary ho an'ny traikefa nahafinaritra an'i Rajasthan nandritra ny herinandro. Ny Palace On Wheels dia manolotra diany mpanjaka mahafinaritra amin'ny vanim-potoana taloha tamin'ny Maharajas teo aloha. Hahafinaritra ireo bilaogera ny mijanona ao anaty tranony feno rendrarendra, miaraka amina rindrina amin'ny rindrina amin'ny rindrina, ao anaty fiaran-dalamby izay ahitana bar bara feno, fiara fisakafoanana roa ary serivisy tena manokana.
Ireo bilaogera 45 hafa dia hanatrika fiaran-dalamby samihafa amin'ny andro ho avy.
Misarika ny sain'ny maro ny bilaogera amin'izao fotoana izao, ary ny mpanao politika ao India dia tsy te-ho afa-mivoaka amin'ny haino aman-jery sosialy mba hahatratra ireo mpandeha sy mpizahatany.